Mpikatroka Roa Nosamborina Nandritra Ny Famoretana Fihetsiketsehana Tao Alzeria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2014 3:06 GMT
Tanora mpikatroka teratany Alzeriana i Mohand Kadi ary teratany Toniziana kosa i Moez Benncir. Mino ny demaokrasia sy ny fanovana izy ireo. Nampidirina am-ponja tao Alzeria izy ireo nanomboka tamin'ny 16 Aprily. Ny helok'izy ireo? Nidiran-doza izy ireo raha niara-nisotro kafe teny amin'ny terasy tao afovoan'ny renivotr'i Alzeria nandritra ny fihetsiketseham-panoherana milamina «Barakat !» andro iray mialoha ny fifidianana filoham-pirenena.
“Avotsory izy ireo” hoy ny hetsika antserasera ho famotsorana an'i Mohand Kadi sy Moez Benncir- sary misokatra hoan'ny rehetra.
Niakatra teo anoloan'ny fitsarana Sidi M'hamed tao Alzeria i Kadi sy Benncirjuges tamin'ny 11 mey. Nangataka ny hanomezana azy ireo sazy an-tranomaizina herintaona farafahakeliny ny mpampanoa lalàna. Voampanga ho “nivorivory tsy mitam-piadiana hanakarontona ny filaminam-bahoaka” izy ireo.” Voampanga ho nijanona tsy ara-dalàna tao Alzeria ihany koa i Moez. Fantatra fa hivoaka amin'ny 18 Mey izao ny didim-pitsarana mahakasika azy ireo. Mandritra izany, hijanona ao amin'ny fonjan'i Serkadji mandritra ny fotoana maromaro izy ireo, fonja malaza amin'ny fanagadrana meloka noho ny fampihorohoroana .
Tamin'ny 30 Aprily, mpanao fihetsiketsehana am-polony no nanao diabe tao Azazga (tanàndehibe ao amin'ny faritr'i Kabylie ao Avaratr'i Alzeria) ho firaisankina amin'izy roalahy:
Fanampin'izany, natsangana ny firaisankinan'ireo mpisolovava mba hiaro an'i Kadi sy Benncir. “Tsy mba nandray anjara akory tamina fihetsiketsehana na fivorivoriana izy roa lahy ireo. Nosamborina izy ireo raha niara-nisotro kafe teny amin'ny terasy tao Alzeria. Nentina natao famotorana izy ireo, noho ny antony maha-mpikambana azy ireo fotsiny ao amin'ny fikambanana Faribolana Hetsiky ny Tanora (Youth Action Assembly). Ny Youth Action Assembly, fantatra koa amin'ny hoe RAJ, dia tambajotran'ny tanora miasa miaro ny fahalalahan'ny olom-pirenena sy mampiroborobo ny zon'ny tanora ao Alzeria.
Nanazava i Abdelghani Badi, mpisolovava mpandala ny zon'Olombelona, sady mpikambana ao amin'ity fikambanana ity fa, misy ambadika “politika ny raharaham-pitsarana azy ireo.” Miasa mba hiaro an'ireto mpikatroka roalahy ireto i Badi, efa maherin'ny 25 andro izay izy roalahy no tany am-ponja.
Ho an'i Badi, voalohany ny raharaha tahaka ity teo amin'ny tantaran'i Alzeria hatry ny vao haingana. “Nogadraina izy ireo na dia mbola tsy nisy didim-pitsarana nivoaka aza. Tsy misy lalàna milaza fanagadrana vonjimaika hoan'ireo olona nandray anjara tamina fihetsiketsehana. Tsy nisy voahaja ireo fepetra momba ny fizotry ny fitsarana tamin'ity raharaha ity», hoy i Badi tamin'ny feo masiaka. Nolazainy ihany koa fa ampiasain'ny fitondrana ho fanafenana heloka hoentina hampitahorana ireo mpikatroka hafa i Kadi sy Benncir. “Miezaka mampitahotra ny manampahefana Alzeriana mba hanakanana ireo tanora tsy hitaky ny zony sy tsy hanao fihetsiketsehana milamina ao amin'ny firenena. Nandritra ny fotoam-pitsarana, nanadihady an'i Mohand sy Moez naharitra fotoana lavalava ny mpitsara mikasika ny fifandraisan'izy ireo amin'ny hetsika “Barakat sy ny RAJ, toa toy ny hoe fanitsakitsahana ny lalàna ny fidirana ho mpikambana amin'ny firaisamonim-pirenena na fikambanan'ny olom-pirenena” .
Eo am-piandrasana ny didim-pitsarana amin'ny 18 mey, nitsangana ny hetsika anaty aterineto sy ivelan'ny aterineto ho fanohanana an'i Mohand Kadi sy Moez Benncir ho fitakiana ny famotsorana azy ireo tsy misy hatak'andro. Natsangana ny kaonty Facebook iombonana amin'ny solon'anarana hoe “Fikambanana ho Famotsorana an'i Mohand Moez”- “Avoahy i Mohand Moez” mba hanairana ny sain'ny Alzeriana manoloana ny manjò an'ireto tovolahy ireto. Nilaza i Mustapha Benfodil, Alzeriana mpanoratra gazety sady mpanoratra boky, fa toy ny tantara nosoratan'i Kafka ilay fitsarana : «Isika no firenena tokana manerantany miantso “ny fihetsik'ireto tanora roalahy mipetraka misotro kafe” ireto ho “fihetsiketsehana tsy ara-dalàna” hoy izy.
Nahasarika ny maro ivelan'i Alzeria ny raharaha mikasika an'i Mohand Kadi sy Moez Benncir. Fikambanana iraisam-pirenena tsy miankina maro tahaka ny Amnesty International, EuromedRights, Avaaz, Human Right Watch [fr] sy ny sisa marobe hafa no naneho ampahibemaso ny fahatezeran'izy ireo ary niantso ho amin'ny famotsorana ireo mpikatroka sy ny fampitsarahana ny endrika herisetra eny amin'ny fitsarana. Andrasana sisa raha hilefitra amin'ity teritery anatiny sy avy any ivelany ity ny fitondrana Alzeriana amin'ny 18 mey. Ao anatin'izany, any am-ponja no handanian'i Mohand Kadi sy Moez Benncir ny alina tontolo.